Aan laabasho lahayn - Soo Bandhigida Xaqiiqada
Deeqa oo 24-sano jir ah waxay Talyaaniga ku nooshahay muddo 7 bilood ah iyadoo wali sugaysa go’aanka magangalyada.
“Hadda ayaa wareysiga la’iga qaaday, oo waxaan sugayaa jawaab” ayay tiri. “Waxay ii sheegeen in ay I caawin doonaan lix bilood, balse ma ogi waxa dhici doona ka dib.”
Marka laga soo tago mustaqbalkeeda oo aan la hubin, ayay hadana ku mahadnaqaysaa in hadda ay joogto wadan aysan ka walwalayn amaankeeda.
Waxay ku guuleysatay in ay jaamacad ku taala Muqdisho ka barato cilmiga kombutarka. Ka dib markii ay waxbarashada dhamaysay ayay u suurto gali wayday in ay shaqo hesho, iyadoo bilowday in ay si mutadawacnimo ah macalin u noqoto. Nasiib daro fursadaheeda shaqo waxaa hor istaagay ururka Al-shabaab kuwaasoo aan ogoleyn in ay dumarku shaqeeyaan. Taasoo ay sii dheertahay in aysan ogeyn xiliga uu dhici karo weerar argagixiso.
Iyadoo fursado la’aan ah isla markaana ku nool deegaan ay Al-shabaab maamulaan, ayay Deeqa go’aansatay in ay Yurub u tahriibto inkastoo aysan aqoon fiican u lahayn khataraha tahriibka.
Dhagayso Deeqa oo ka wareysa safarkii Somalia, Ethiopia ilaa Sudan iyo dhibaatadii ay kala kulantahay muqalisiinta xaasidiinta ah.
Ka dib markii ay ka baxsatay afduubayaashii, ayaa Deeqa iyo koox la socotay waxaa loo qaaday Tripoli halkaasoo ay ka sii wateen safarkoodii Yurub. Inkastoo ay ku dhaweyd in ay ka baxdo xaaladii jirdilka iyo cadaadiska, ayay Deeqa markale gacanta u gashay muqalasiinta kuwaasoo haystay muddo sadex bilood ah. Xiligaas ayaa Deeqa iyo dadkii la socday waxay helayaan cunto yar, inkastoo habeenada qaar ay seexan jireen iyaga oo baahan. Dadka haystay ayaa u isticmaali jiray ragga adoonsi kuwaasoo ku shaqaysan jiray, halka dumarkana si joogto ah loo kufsan jiray. Jirdilka iyo garaacida ayaa caadi iska ahayd.
“Mararka qaarkood habeenkii saq-dhexe ayay noo imaan jireen oo na garaaci jireen” ayay tiri. “Qofkasta waa la garaaci jiray balse dhibaatada waxay ahayd in lagula basso.”
“La’ima kufsan aniga,” ayay ku dartay “Waxaan ahaa qof xanuusan oo jirkiisa go’go’ay maadaama aan gubtay , waxaan ahaa qof soo uraya.”
Ugu dambeyntii, qoyska Deeqa ayaa ku guuleystay in ay bixiyaan 1000 dollar iyadoo markaasi la sii daayay is ay doonta u raacdo. Iyaga oo aan lahayn xoriyad ay ku doortaan doonta ay raacayaan ayaa Deeqa iyo dadkii la socday lagu qasbay in ay raacaan labo doomood oo bac laga sameeyay. Markii ay badda galeena ayay doontii bilowday in ay aaryo baxdo.
Daawo Deeqa oo ka waramaysa safarkii badda iyo badbaadadii Talyaaniga.
Taariikhda wareysiga: 26 August 2015 | Taariikhda la badalay: 15 April 2016 |
Wareysi qaade: Mariam Hersi | Qoraaga: Christa Awuor Odinga | Muuqaal soo saaraha: Viktor Nordenskiöld